Ny toeram-pitrandrahan'ny Mpanjaka Solomon Fizarana 22 - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2017-03 mpandimby ny Magazine > Ny toeram-pitrandrahana XMUMX Mpanjaka
"Tsy nanendry ahy izy ireo, ka hiala amin'ny fiangonana aho," hoy i Jason tamin'ny fitarainan'ny tebiteby tamin'ny feony izay mbola tsy hitako hatramin'izay. "Efa nanao be dia be ho an'io vondrom-piarahamonina io aho - nanao fampianarana Baiboly, namangy ny marary, ary nahoana ny tany no namaha azy ireo ... voatokana? Ny toriteniny dia tokony ho resin-tory, mahantra ny fahalalany ny Baiboly ary tsy sariaka koa izy » Nahagaga ahy ny lolom-po nanjo an'i Jason, saingy nampiseho zavatra lehibe kokoa amin'ny lafiny rehetra - ny reharehany.
Ny fireharehana halan’Andriamanitra (Ohab 6,16-17), dia manombantombana ny tena sy manambany ny hafa. Amin'ny ohabolana 3,34 Nilaza i Solomona Mpanjaka fa “manaraby an’izay maneso” Andriamanitra. Toherin’Andriamanitra ny olona manana fomba fiaina mahatonga azy tsy hiantehitra amin’ny fanampian’Andriamanitra. Isika rehetra dia miady amin'ny avonavona, izay matetika dia saro-takarina ka tsy tsikaritra akory ny fomba fiasany. “Nefa”, hoy i Solomona nanohy ny teniny: “Hanome fahasoavana ho an’ny manetry tena Izy”. Manana safidy isika. Afaka mamela ny avonavona na ny fanetren-tena hitarika ny eritreritsika sy ny fitondrantenantsika isika. Inona no atao hoe fanetren-tena ary inona no fanalahidin'ny fanetren-tena? Aiza ianao no manomboka? Ahoana no ahafahantsika misafidy ny fanetren-tena sy mandray avy amin’Andriamanitra izay rehetra tiany homena antsika?
Mpandraharaha sy mpanoratra marobe Steven K. Scott no mitantara ny tohin'ny mpandraharaha iray tapitrisa dolara miaraka amin'ny mpiasa an'arivony. Na dia nananany vola hividianana ny vola rehetra aza izy, dia tsy sambatra, mangidy, ary haingana. Ireo mpiasa ao aminy, na ny fianakaviany aza, dia nahita fa tsy sahiran-tsaina. Tsy zakan'ny vadiny intsony ny fihetsiny feno herisetra ary nangataka ny pasiterany hiresaka taminy. Nihaino ny lahatenin'ilay lehilahy ny pasitera momba ny zava-bitany ary vetivety dia nahatsapa fa ny avonavona no nanapaka ny fon'ny olona sy ny sainy. Nambarany fa izy irery no nanangana ny orinasany amin'ny zava-drehetra. Tokony ho niezaka mafy izy mba hahazoana diplaoma any amin'ny anjerimanontolo. Nirehareha fa nanao ny zavatra rehetra izy ary tsy nandoa trosa na iza na iza. Dia nanontany azy ilay pasitera hoe: «Iza no nanova ny diarinao? Iza no namahana anao ho zazakely? Iza no nampianatra anao hamaky sy hanoratra? Iza no nanome anao asa izay nahafahanao namita ny fianaranao? Iza no manompo anao ao amin'ny kafe? Iza no manadio ny trano fidiovana amin'ny orinasanao? » Niditra teo izy dia nanondrika ny lohany. Fotoana vitsy taty aoriana dia niaiky tamin'ny ranomaso teo imasony izy: «Izao no saiko izao dia hitako fa tsy vitako irery ny nanao izany rehetra izany. Raha tsy nisy hatsaram-panahy sy fanohanan'ny hafa dia mety tsy hahavita na inona na inona aho. Nanontany azy ilay pasitera hoe: "Tsy mihevitra ve ianao fa mendrika fankasitrahana kely izy ireo?"
Niova ny fon'ny lehilahy, toa andro iray ka hatramin'ny manaraka. Tao anatin'ny volana vitsy dia nanoratra taratasy fisaorana ho an'ny mpiasany tsirairay sy amin'ny olona rehetra izay, araka izay azony atao, no nandray anjara tamin'ny fiainany. Tsy hoe nahazo fankasitrahana lalina fotsiny izy, fa nanaja sy nankasitraka izay rehetra manodidina azy. Tao anatin'ny herintaona dia niova ho olona hafa. Fifaliana sy fiadanana no nanolo ny hatezerana sy ny korontana tao am-pony. Toa tanora kokoa izy. Nankafy azy ny mpiasa ao aminy satria nanaja azy ireo sy nanaja azy, izay noheverina fa noho ny fanetren-tena marina.
Ireo zavaboary nataon'Andriamanitra Ity tantara ity dia mampiseho amintsika ny fanalahidin'ny fanetren-tena. Tahaka ny nahatakaran’ilay mpandraharaha fa tsy hahavita na inona na inona izy raha tsy misy ny fanampian’ny hafa, dia tokony ho takatsika koa fa ny fanetren-tena dia manomboka amin’ny fahatakarana fa tsy afaka manao na inona na inona isika raha tsy misy an’Andriamanitra. Tsy nisy fiantraikany teo amin'ny fidirantsika teo amin'ny fisiana isika ary tsy afaka mirehareha na milaza fa namokatra zavatra tsara ho antsika irery. Zavaboary isika noho ny finiavan’Andriamanitra. Mpanota isika, nefa Andriamanitra no nandray ny dingana voalohany ka nanatona antsika ary nampahafantatra antsika ny fitiavany tsy hay lazaina (1 Jaona 4,19). Tsy afaka manao na inona na inona isika raha tsy misy azy. Ny hany azontsika atao dia ny miteny hoe: "Misaotra anao aho" ary miala sasatra amin'ny fahamarinana amin'ny maha-ireo voantso ao amin'i Jesoa Kristy - ekena, voavela heloka ary notiavina tsy misy fepetra.
Fomba iray hafa fandrefesana ny habeny Andao hanontany tena hoe: "Ahoana no ahafahako manetry tena"? teny 3,34 war fast 1000 Jahre nachdem Salomo seine weisen Worte verfasst hatte, so wahr und aktuell, dass die Apostel Johannes und Petrus darauf in ihren Lehren zurückgriffen. In seinem Brief bei dem es oft um Unterordnen und Dienen geht, schreibt Paulus: «Ihr alle sollt euch ... mit Demut bekleiden [umgürten]» (1 Petr 5,5; Schlachter 2000). Amin’ny alalan’io fanoharana io, i Petera dia mampiasa ny sarin’ny mpanompo iray izay manao saron-tava manokana ary mampiseho ny fahavononany hanompo. Hoy i Petera: “Aoka ianareo rehetra samy ho vonona hifanompo amin’ny fanetren-tena”. Tsy isalasalana fa nieritreritra ny Fanasana Farany i Petera, rehefa nanao saron-tava i Jesosy ary nanasa ny tongotry ny mpianatra3,4-17). Mitovy amin’ilay nampiasain’i Petera ny teny hoe “misikina” nampiasain’i Jaona. Nesorin’i Jesosy ny fehiloha ary nanao ny tenany ho mpanompon’izy rehetra. Nandohalika Izy ka nanasa ny tongotr’ireo. Rehefa nanao izany izy, dia nampiditra fomba fiaina vaovao izay mandrefy ny haben’ny fanompoana ny hafa. Mieboebo mibanjina ny hafa ka manao hoe: "Manompoa ahy!", ny fanetren-tena dia miondrika amin'ny hafa ary manao hoe: "Ahoana no hanompoako anao?" Mifanohitra amin'ny zava-mitranga eto amin'izao tontolo izao izay asaina manodinkodina sy misongadina ary mametraka ny tenany amin'ny fahazavana tsara kokoa eo imason'ny hafa. Manompo an’Andriamanitra manetry tena isika, izay mandohalika eo anatrehan’ny zavaboariny mba hanompo azy ireo. Tsy mahagaga ve izany?
"Ataovy tahaka ny nataoko anao" Ny fanetren-tena dia tsy midika hoe mihevi-tena ho ambany na mieritreritra ny talentantsika sy ny toetrantsika isika. Mazava ho azy fa tsy momba ny fampisehoana ny tenanao ho toy ny tsy misy ary tsy misy olona. Satria ho avon-doha tsy mitongilana izany mikendry ny hoderaina noho izy manetry tena! Ny fanetren-tena dia tsy misy ifandraisany amin'ny fiarovan-tena, te hanana ny teny farany, na ny mitondra ny sasany hampidina ny maha-ambony azy. Ireharehantsika ny mampiditra ny tenantsika ka mahatsiaro tena tsy miankina amin'Andriamanitra, mihevitra ny tenantsika ho manan-danja kokoa ary manadino Azy. Ny fanetren-tena dia mahatonga antsika hanaiky an’Andriamanitra ary manaiky isika fa miankina tanteraka aminy. Midika izany fa tsy mijery ny tenantsika isika fa mitodika tanteraka amin'Andriamanitra, izay tia antsika ary mijery tsara kokoa noho isika.
Rehefa avy nanasa ny tongotry ny mpianany i Jesosy dia nanao hoe: "Ataovy tahaka ny nataoko taminao." Tsy nilaza izy fa ny hany fomba hanompoana dia ny manasa ny tongotry ny hafa, fa nanome azy ireo ohatra ny amin'ny fomba fiainana. Ny fanetrentena dia mitady foana ny fomba hanompoana. Manampy antsika hanaiky ny zava-misy, izany hoe noho ny fahasoavan'Andriamanitra, isika no fitaovana entiny, mitondra azy ary solontenany eto amin'izao tontolo izao. Reny Teresa dia ohatra iray amin'ny "fanetrentena mavitrika". Nilaza izy fa nahita ny tavan 'i Jesosy teo amin' ny tavan 'izay rehetra nanampy azy. Tsy nantsoina angamba isika hoe Mother Teresa manaraka, fa kosa vao tokony hampanahy kokoa ireo filànan'ny mpiara-belona amintsika isika. Isaky ny alaim-panahy ny handinika tsara ny tenantsika isika dia tsara ny mahatsiaro ny tenin'ny Arsobisialy Helder Camara hoe: "Rehefa miseho am-pahibemaso sy mpankafy sy mpankafy aho, dia mitodika any amin'i Kristy aho ary lazao aminy fotsiny: Tompoko, io no fidinao fandresena teto Jerosalema! Izaho ihany no ampondra kely mitaingina ».